Musharixiinta is-diiwaan gelisay tartanka doorashada xilka madaxweynaha Soomaaliya (AKHRISO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Musharixiinta is-diiwaan gelisay tartanka doorashada xilka madaxweynaha Soomaaliya (AKHRISO)
Guddiga doorashada madaxweynaha Soomaaliya C/raxmaan Ducaale Beyle ayaa maanta ku dhawaaqay in lasoo gaba-gabeeyay diiwaan galinta musharaxiinta u tartameeysa doorashada xilka madaxweynaha Soomaaliya, taas oo soo bilaabatay 26kii bishaan Janaayo islamarkaana maanta ugu dambeysay.
Guddiga ayaa sheegay in illaa 24 musharax ay guud-ahaan is-diiwaan geliyeen tartanka doorashada xilka madaxweynaha Soomaaliya, waxaana musharixiintaasi qaarkood ay yihiin siyaasiyiin hore xilal kala duwan dalka uga soo qabtay.
Musharixiinta sanadkaan doorashada ku tartamaya ayaa waxaa ka mid ah madaxweynaha dowladda federaaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke, madaxweynihii hore dowladda KMG aheyd Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo sidoo kale Maxamed C/laahi Farmaajo oo isna ahaa ra’iisul wasaarihii xukuumadii KMG ahayd ee Soomaaliya.
Dhamaan musharixiinta haatan u tartameeysa xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa kasoo kala jeeda beelaha Hawiye iyo Daarood, waxayna labadaasi beelood midkii xilka madaxweyne ku guuleysta, midka kale uu qaadan doonnaa xilka ra’iisul wasaaraha Soomaaliya.
Hadaba hoos ka aqriso magacyadda musharixiinta is-diiwaan gelisay:-